Izingubo eziyisixwayiso → okokuphromotha • Imifekethiso yekhompyutha ye-P & M
Izingubo zokuxwayisa zokukhangisa zivame ukunikezelwa ezindaweni zokusebenza kanye nasezindaweni zomphakathi. Kamizelki Baphinde bakhethwe ngabahleli bemicimbi ethile yezemidlalo noma ngamaqembu, ikakhulukazi lapho indawo yokubamba iqhaza kulo mcimbi iyindawo yomphakathi, njengemihlangano yamabhayisikili noma ama-marathoni abagijimi.
Izembatho ezibonakalayo zomsebenzi nezemidlalo
Kwethu isitolo kubhukumaka "Izingubo zokukhangisa - izingubo zokuxwayisa”Sinikela ngamamodeli anemingcele yokusebenza efanelekile, ngenxa yokuthi agcina umsebenzi wawo wokuqala isikhathi eside, okusiza ukukhulisa ukubonakala ngesikhathi sakusihlwa ngenxa yemivimbo ekhanyayo.
Sisebenzisa ubuchwepheshe besimanje ukudala ukuphrinta, ngoba sifuna ukuqinisekisa, ngaphezu kokuphepha, ukubukeka okukhangayo, kepha futhi nokwanda kokuqina.
Phakathi kwezingubo ezibonakala kahle, ikakhulukazi sinikela ngamavesti abonakalisayo hhayi kubantu abadala kuphela ezinhlotsheni ze-unisex, kepha nasezinganeni. Amamodeli atholakalayo zombili aboshelwe futhi afakwa phezu kwekhanda. Ngenxa yesisindo sabo esincane, kulula ukuzisebenzisa. Ngingasetshenziselwa noma yisiphi isimo sezulu, ehlobo nasebusika. Ngenxa yezakhiwo zayo, okokusebenza kuvumelana nomsebenzisi, okubavumela ukuthi bahlanganiswe kalula isigqoko, ijakhethi noma ihembe lepolo.
Amanani wokuncintisana, ukwakheka ngakunye
Enye yezinzuzo ezinkulu ukuncintisana Intengo ephansi. Ukwenza iphrojekthi bese uyikhiqiza ngamanani aphansi kuzoba yimpendulo efanelekile kulabo abanendaba ngentengo ephansi noma abanesabelomali esincane.
Ukuklama nokuthunga ukukhangisa izingubo zokuxwayisa Akudingeki ukuthi ibize imali eshisiwe, okuqinisekile ukuthi izothokozisa labo abasebhajethi eqinile.
Kungenzeka ukumakwa okungeziwe kwezingubo nge ukugqokwa kwamakhompyutha noma ukuphrinta isikrini kuzovumela ukwenza ngezifiso komuntu ngamunye.
Lokhu kubaluleke kakhulu lapho umsebenzisi ephakathi kwabamele ezinye izinkampani, izikhungo - isb. Ngenkathi esebenza endaweni yokwakha noma endlini yokugcina lapho osonkontileka abancane bezinkampani ezahlukahlukene basebenza noma ngesikhathi semicimbi yezemidlalo lapho ababambiqhaza abaningi abamele izinhlangano ezahlukahlukene babamba iqhaza. Ukumelana nokuhuzuka kusho ukuthi zizohlala zinjalo isikhathi eside. Ikhwalithi enjalo izoba nomthelela omuhle ekubukeni komkhiqizo.
i-sweatshirt e-zipped ekhanyayoivestiivesti yokuxwayisaIsikibha esikhanyayoijakhethi ekhanyayoizingubo zokuxwayisaizingubo ezibonakala kakhuluizingubo zokubonakala eziphezulu ze-allegroizingubo ezibonakala kakhuluingubo yezingubo ezibonakala kakhuluizingubo zokuxwayisa abashayeliukubonakala okuphezulu izingubo zokubonakala eziphezuluizingubo ezibonakalisa kakhuluizembatho eziphakeme zokubonakala zoboyaumenzi wezingubo ezibonakala ngokuphezului-waraw ebonakalayo ephezulu yokugqokaizingubo ezibonakala kakhulu ezinokuphrintaizingubo zokusebenza ezibonakala kakhuluizingubo zomsebenzi ezibonakala kakhuluI-3m yokuxwayisa ngezingubo zokugqokaitheyiphu yokuxwayisa ebonakalayo yezingubo 3m
5 / 5 ( 11 amavoti )